စက်ဘီး Socks နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ စက်ဘီး Socks ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
Jin Minng Industrial Co., Ltd. တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကျော်ကြားသောအမည်များတစ်ခုဖြစ်တယ် Taiwan ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူတစ်ဦးပြည့်စုံသည့်အကွာအဝေး စက်ဘီး Socks သော sturdily သူတို့ရဲ့သယ်ဆောင်များအတွက်ဆောက်လုပ်တန်ဖိုးထားကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး၏အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းရောင်းချသူထံမှရယူဖို့သောဤအသုံးချဖို့တန်းမြင့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျနော်တို့အရွယ်အစားနှင့်ဖောက်သည် '' အတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ gradations နှင့်အတူထိုထုတ်ကုန်ပေးစွမ်းပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - MZ108-LL/R
စရိုက်လက္ခဏာတွေ：ရွေ့လျားနေသောသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဤစက်ဘီးပုံနှိပ်ခြင်းများသည်အေးအေးဆေးဆေးသာယာလှပသောပုံစံဖြစ်သည်.peddle သို့သင်၏ခြေကိုတင်နှင့်စတိုင်အပြင်မှာရ.၀ တ်စုံနှင့်မျက်ရည်အတောင့်တင်းဆုံးနေရာများတွင်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ခွန်အားကိုသေချာစေရန်ဖနောင့်နှင့်အားဖြည့်ပါ.နှစ်ဆဖုံးအုပ်ထားသောကြိုး-သမားရိုးကျဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်နှစ်ခုကြိုးအားဖြင့်ပတ်ရစ်နေသည်.တစ်ခုက S လှည့်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်,နှင့်အခြား Z ကိုလှည့်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်(အပြင်ဘက်အဖုံးနှင့်အတွင်းပိုင်းအဖုံး)
ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်စုဆောင်းရရှိသောချွေးများ၏အလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအပြင်အစိုဓာတ်ကိုယိုစေသောယိုခြင်း,အစိုဓာတ်ထိန်းပေးသောချည်သည်စိုစွတ်လာသောအခါအရေပြားအရည်ကြည်ဖုများနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်,နှင့်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏ပြန့်ပွားကိုလျှော့ချ.တစ် ဦး တည်းသော၏ရှေ့ဆုံး,တိုးအထူထွက်သပိတ်မှောက်အဆိုပါ jacquard ထည်,ကူရှင်သန်ရန်နှင့်ချွေးစုပ်ယူရန်အောက်ခြေရှိပျော့ပျောင်းသောထည်.တစ်ခုချင်းစီကိုခြေလျင်များအတွက်အထူးဒီဇိုင်း-L နှင့် R သည်ခြေအိတ်ပေါ်တွင်မှတ်သားထားသည်-လက်ဝဲနှင့်လက်ျာခြေမသည်.လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်သက်တောင့်သက်သာရှိသောကွက်လပ်နှင့်နေ့စဉ်နေ့စဉ်သက်တောင့်သက်သာရှိစေပါ.မြင့်မားစွာအကြမ်းခံ,အစိုဓာတ်ကို wicking သူတို့ကိုသင်အကြိုက်ဆုံးအားကစားများအတွက်စုံလင်သောအောင်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestsportssocks.com/my/cycling-socks.html
အကောင်းဆုံး စက်ဘီး Socks ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် စက်ဘီး Socks မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ